‘डीआईजी बढुवामा कचकचको अर्थ छैन’ – Chetananews.com
‘डीआईजी बढुवामा कचकचको अर्थ छैन’
१९ श्रावण २०७४, बिहीबार ०६:५५ 451 पटक हेरिएको
१२ साउन, काठमाडौं । उर्जामन्त्री हुँदा लोडसेडिङ हटाएर छवि राम्रो बनाएका माओवादी नेता जनार्दन शर्मा यतिबेला गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । प्रहरीको बढुवामा असन्तुष्टि सतहमा आइरहेका बेला शर्माले उर्जामा कमाएको नाम गृहमा रहँदा बदनामीमा त परिणत हुँदैन ? यस्तो संशय जनमानसमा देखिन थालेको छ ।
यो कचकचको अर्थ छैन । इतिहासमा पहिलोपटक विना दबाव, निश्पक्ष रुपमा विना आर्थिक चलखेल बढुवा भएको छ । यस्तो बहुदल आएपछि पहिलोपटक भएको हो, प्रहरीको तलसम्मको दर्जाले बुझेको छ
तर, तपाईहरु नै भन्नुहुन्छ, जसको नीति उसको नेतृत्व । तपाईले बनाएका योजना र नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न पाउँदा त उर्जामा तपाई नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प होइन र ?
हिजोमात्र मेरै पार्टीका महेन्द्र शाही मन्त्री हुनुभएको छ । र, मेरै साथी नै मन्त्री भएकाले यो भिजन कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँ हिजो पनि हामीसँगै एउटै टिममा काम गरेको नेता हो । मेरो स्पिरिट र भिजन र उहाँको स्पिरिट र भिजन मिल्छ । म उहाँलाई आवश्यक मद्दत गर्छु ।
अर्को कुरा, मन्त्री मनखुसीले हुन पाइँदैन । पार्टीले खटाउने हो । माओवादी पार्टीले मलाई गृहमा पठाउन आवश्यक ठानेपछि मैले पनि नाइँ भनिनँ । किनभने यहाँ आएपछि केही सुधार गर्न सकिन्छभने प्रयास गरौं भन्ने मेरो पनि विचार रहृयो ।
तर, तपाईले मन्त्रालय छाडेको विद्युतमा डेढ/दुई महिनामा फेरि समस्या देखिए । एलईडी बल्ब खरिददेखि ट्रान्समिसन लाइन निर्माणसम्म्म अवरोध आयो । प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले नै कतै हिउँदमा लोडसेडिङ पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेको पनि सुनियो । त्यो सुन्दा म भएको भए यस्तो त हुँदैनथ्यो भन्ने लागेन ?
कुलमानजी अप्ठ्यारोमा पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । उहाँलाई एमडी बनाएर मैले जिम्मेवारी दिएर आएको छु । कामलाई व्यवस्थित ढंगले लैजाने हो । हो, केही समय मन्त्री खाली भयो । त्यसले मन्त्रीको स्तरबाट हुनुपर्ने सहयोग नपुगेको होला । बाहिरबाट मैले मन्त्रीको हैसियतमा सपोर्ट गर्ने कुरा भएन । अब त मन्त्री आइसक्नुभयो । बाँकी कुरा एमडीका हैसियतमा गर्ने उहाँले नै गर्ने हो, अन्त पन्छाएर हुँदैन ।
फेरि पनि मैले त पूर्ण सपोर्ट गरिरहेको छु, आम जनताको समर्थन छ । काम गर्दा डराउनुपर्छ, कुरा यत्ति हो भ्रष्टाचार नगर्ने । कसैले हल्ला गर्दैमा केही हुँदैन ।
बेलाबेला तपाईका पार्टीकै नेताहरुले ठट्यौली शैलीमा भन्नुहुन्छ कि हामीले काठमाडौंको बाटो फराकिलो गर्‍यौं, लोडसेडिङ हटायौं । तर, भोटचाहिँ अरुलाई दिए । यो शहरमा जे गर्दा पनि नहुने रहेछ, छोडिदिउँ भनेर सोचेको त होइन ?
होइन, त्यो पक्षमा म छैन । जनतालाई दोष दिएर हुँदैन । हामीले गरेका कामबारे राजनीतिक रुपमा जनतामाझ पुर्‍यायौं कि पुर्‍याएनौं हामीले भर्खरै समीक्षा गर्‍यौं । पार्टीले स्वामित्व लियो कि लिएन भन्ने प्रश्न छ ।
एउटा मन्त्रीले गरेको काम गरेको जनताले अनुभत गरेको छ, वत्ती बालेका छन् तर, त्यसलाई राजनीतिकरुपले उपलब्धीका रुपमा जनतामा लिएर जाने कुरामा कमी भएको छ । जनताको दोष होइन । २० औं वर्षदेखिको लोडसेडिङ अन्त्य भएको जनताले बिर्सँदैनन्, आज नगरे पनि भोलि मूल्यांकन गर्छन् ।
तर, यसको स्वामित्व हामीले कति लियौं, कस्ता उम्मेदवार उठायौं भन्ने तमाम प्रश्न छन् । त्यसैले म जनतालाई दोष दिन्नँ, दोष हाम्रो हो, पार्टीको हो । जनताका लागि अझ बढी गर्न मन छ, त्यसैले म गृहमा आएँ ।
कस्तो रहृयो त गृहमन्त्रालयमा झण्डै २ महिनाको कार्यकाल ?
हिजो र आजको भूमिका धेरै फरक छ । त्यहाँ (उर्जा) प्राविधिकरुपमा विषयवस्तुलाई बुझ्दा र समाधान गर्दा एउटा गति प्राप्त हुन्थ्यो । यहाँ राजनीतिकरुपमा बुझ्नुपर्छ र त्यो अनुसारको योजना बनाउनुपर्छ । किनकि यो राजनीतिक स्तरको मन्त्रालय हो ।
यद्यपि कतिपय प्राविधिक विषयहरु पनि नभएका होइनन् । सानो ट्राफिक व्यवस्थापनको कुराले, प्रहरीको कुराले, विपदको समस्या र समाधानका कुराले, कतै गुण्डागर्दीले दुःख दिँदा जनतामा पर्ने प्रभाव फरक प्रकृतिको छ । यद्यपि उर्जामा पनि चुलो र वत्ति बाल्नेसँग पनि थियो ।
भुल्न नसकिने भोजको स्वाद
संविधान लंगुरबुर्जा खेल्दा दाउ
हामीले पार्टीभित्र परिवर्तनको अभियान